PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-11-05 - Silindele uzuma ageze igama lakhe
Silindele uzuma ageze igama lakhe
Ilanga langeSonto - 2017-11-05 - Imibono -
IZINDABA ezibe sematheni kuleli sonto kube ngezokuphendula imibuzo kukaMengameli Jacob Zuma ephalamende. Umnu Zuma ubephendula imibuzo evela emaqenjini ezepolitiki ehlukahlukene, obese kuyisigaba sokugcina sokuphendula kwakhe imibuzo kulo nyaka.
Okugqame kakhulu kulesi sigaba yindlela umnu Zuma ayiphendule ngayo imibuzo yamaqembu aphikisayo. Nakuba bekulindelekile ukuba umsholozi aphinde ashelele njengenjwayelo ekuphenduleni imibuzo ngendlela eshiya amaqembu aphikisayo engagculisekile, angeke unganakwa umbuzo womholi wedemocratic Alliance, umnu Mmuisi Maimane, omayelana nencwadi esihloko sithi "The Presindent's Keepers" ebhalwe ngujacques Pauw esola umnu Zuma ngokugwazelwa ngentshontsho lesigidi samarandi (R1 million) njalo ngenyanga yinjinga yenkampani yonogada iroyal Security, uroy Moodley.
Umnu Moodley lona usolwa ngokuhlomula ngandlela thile kumathenda kahulumeni. Njengoba bekulindelekile, umsholozi uzichithe njengamampunge lezi zinsolo ezivezwe yile ncwadi ebiphethwe ngumnu Maimane ephalamende.
Nokho umbuzo uthi kuyoze kube nini umnu Zuma engabathatheli izinyathelo zomthetho abantu ababhalela umphakathi izinto ezingesilona iqiniso ngaye, uma ngempela zingelona iqiniso? Sekukaningi kuphuma imibiko ebheca umengameli ngezinsolo ezibucayi zenkohlakalo, kodwa asikaze sizwe nakanye ukuthi unikele enkantolo eyohlanza igama lakhe.
Uma zonke lezi zinto ezishiwo ngomnu Zuma zingamanga, umbuzo uthi, kuyamjabulisa yini yena ukunindwa ngendle ngalolu hlobo?
Ngaphandle uma kukhona okudla amatshontsho emsamo, umuntu nje ojwayelekile, ukuyeke okokuthi umengameli wezwe imbala, anganikela enkantolo eyovulela amacala abantu abambhala ezincwadini nasemaphephandabeni, uma abakubhala ngaye kungamanga futhi kuhlose ukudicilela phansi isithunzi sakhe.
Akwenele ukuthi umengameli akuhleke usulu ukubhecwa kwakhe ngobende uma inyama engayidlanga. Ukuthula kwakhe engazisukumeli izinsolo ahlale ebekwa zona imihla namalanga kwenza umphakathi uqale ubone sengathi laba abaqhamuka nalezi zindaba abawona uhubhu kabhejane, kodwa bayihlaba esikhonkosini. Izinsolo zokuthi umnu Zuma ubemukela isheke lesigidi samarandi kumnu Moodley ziyohlale njalo ziyiqiniso emehlweni abantu kuze kube yena uqobo umnu Zuma uziphonsela inselelo. Sithule sibhekile ukuba siluzwe uhlangothi lwakhe kulolu daba ngaphandle kokuthi athi "Angazi" noma "Angazani namali".
Khona manjalo, isenzo sikangqongqoshe Wezokuthuthukiswa Komphakathi kuzwelonke, unkk Bathabile Dlamini, sokwenqaba ukunikezela ngomsebenzi wokuholela isibonelelo sikahulumeni enkampanini kahulumeni isouth African Post Office (Sapo) sithanda ukuqinisa izinsolo zokuthi kukhona umkhonyovu okhona kulolu daba.
Njengamanje lo msebenzi usingethwe yinkampani ezimele icash Paymaster Service kanti kuthiwa ithola izindodla zemali ngalo msebenzi. Uhulumeni angonga enhle imali ngokuba lo msebenzi wenziwe yinkampani yakhe ngoba lokho kungasho ukuthi imali yabakhokhi bentela ibuyela kubona. Mkhulu ugcobho esingawazi ngalolu daba lokuholelwa kwabantu isibonelelo sikahulumeni.